Allegro Integration - Propars E-Ihracat को साथ Allegro मा बेच्न सुरु गर्नुहोस्!
यो Propars संग तपाइँको Allegro स्टोर व्यवस्थापन गर्न सजिलो छ!
Propars संग Allegro मा बिक्री शुरू, र तपाइँको उत्पादनहरु पोल्याण्ड मा बेचिनेछ!
ई निर्यात Propars allegro एकीकरण संग धेरै सजिलो छ!
एलेग्रो को आदेशहरु तपाइँको सबै अन्य आदेशहरु संग एकै स्क्रीन मा एकत्रित गरीन्छ।
तपाइँ एक एकल क्लिक संग एलेग्रो मा Propars मा जोड्ने उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ।
पोल्याण्ड-आधारित बजार एलेग्रो पूर्वी युरोपेली बजारको निर्विवाद नेता र युरोपेली बजारमा नयाँ खेलाडी हो। Allegro पछिल्लो अवधिमा यसको ठूलो विकास पछि, संसारको 10 सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार मध्ये एक भएको छ।
बिक्रेताहरूको लागि एलेग्रोको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो होस्ट गर्ने बिक्रेताहरूको संख्या हो। सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको संख्या दैनिक 24 मिलियन भन्दा बढी भए तापनि, प्लेटफर्ममा बिक्रेताहरूको दर यसको प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा धेरै कम छ। यसको मतलब हल्का प्रतिस्पर्धा र बिक्रेताहरूको लागि अधिक लाभ।
यद्यपि एलेग्रोसँग स्थानीय बजारको उपस्थिति छ, यो वास्तवमा एक धेरै सामान्य विश्वव्यापी प्लेटफर्म हो, विशेष गरी पूर्वी यूरोपमा।
यस क्षेत्रमा जहाँ अन्य प्रमुख प्लेटफर्महरू अझै पूर्ण रूपमा प्रवेश गरेका छैनन्, Allegro एक धेरै आला बिक्री च्यानल हो।
ई-कमर्स अब हरेक व्यवसायको लागि आवश्यक छ। यस अवस्थामा, तपाईंले आफ्नो सबै ई-वाणिज्यलाई एकल प्लेटफर्म वा साइटमा बाँध्नु हुँदैन। यद्यपि विश्वव्यापी दिग्गजहरूले लोकोमोटिभ लिइरहेका छन्, त्यहाँ धेरै क्षेत्रीय रूपमा बलियो बजारहरू छन्। Allegro ती मध्ये एक हो।
पोल्याण्डमा मुख्यालय रहेको, यो बजारले तपाईंको व्यवसायको लागि एकदमै नयाँ राजस्व मोडेल प्रस्ताव गर्न सक्छ। यसबाहेक; यो बजार, जहाँ लगभग सबै उत्पादनहरू बेचिन्छ र बिक्रेताहरूको संख्या धेरै छैन, टर्कीमा मात्र5ठूला बजारहरू भन्दा बढी कारोबार छ।
यो आला बजार मा आफ्नो स्थान लिएर आफ्नो ई-निर्यात नेटवर्क को विकास गर्न को लागी यो तपाईं मा निर्भर छ। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको प्रोपर्स प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्नु हो। Propars टर्की मा Allegro को समाधान साझेदार हो र तपाईंलाई आवश्यक सबै मामिलामा समर्थन प्रदान गर्दछ।
Allegro एकीकरण Propars
Propars-Allegro सहयोग र एकीकरण; यसले तपाईंलाई सजिलैसँग Allegro मा बिक्री सुरु गर्न अनुमति दिन्छ। Propars को उन्नत इन्टरफेस संग, टर्की मा आफ्नो अनलाइन स्टोर संग ग्लोबल प्लेटफार्महरु को प्रबन्ध गर्दा तपाईको बिक्री नेटवर्क मा Allegro थप्न सक्नुहुन्छ।
Allegro मा, जसको मातृभाषा पोलिश हो, यो Propars प्यानलको साथ टर्की भाषा जानेर मात्र बेच्न सम्भव छ। आफ्नो उत्पादनहरू Propars प्यानलमा स्थानान्तरण गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई Allegro मा सजिलै बेच्नुहोस्। यसबाहेक, तपाईंको उत्पादन जानकारी पोलिशमा अनुवाद गरिनेछ र तपाईंको उत्पादनको लागि मापनको एकाइहरू स्वचालित रूपमा स्थानीयकरण गरिनेछ।
तपाईं एलेग्रोबाट एकल प्यानलमा आफ्ना अर्डरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र एक क्लिकमा ई-इनभ्वाइसहरू जारी गर्न सक्नुहुन्छ।
यसबाहेक, यदि तपाईंसँग Allegro मा स्टोर छैन भने, Propars टोलीले तपाईंको व्यवसायको नाममा तपाईंको Allegro स्टोर नि:शुल्क खोल्छ!